आवरणमा रेशम चौधरी, सि के रावत र विप्लप देखाउदैं भित्र अरु नै केही पाक्दै त छैन ? « Khabar24Nepal
नेपालको राजनिती बजारमा यस समय तातेको छ । राजनिती पृष्ठभुमीमा कहिले निर्मला पन्तको मुद्धा त कहिले गोबिन्द के.सीको अनसन त कहिले पशुपती शर्माको गित । एक सेलाउन नपाउदैं अर्को घटनाले राजनैतिक बजार तताएको छ । सरकार पक्ष कहिले पानी जहाज कार्यालय त कहिले स्वरोजगार कार्यक्रम भन्दै उद्धघाटनमा व्यस्त छ भने प्रतिपक्ष आफु संग कुनै ऐजेण्डा नभए जस्तै सडकमा तातेका कुरामा मलजल हाल्न नै व्यस्त छ । अहिले फेरि यि भन्दा फरक तर राजनैतिक बजार सारौ तताउने समाचार बारम्बार बाहिर आईरहेका छन ।
टिकापुर काण्डका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलाई जेल भित्रै बाट सफत ग्रहण गराए सगैं अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न नेपाली जनताको मनमा रहिनै रहेको थियो । त्यसको केहि समय पछि जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । यो सगैं राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । दुई चार दिन नेपालको राजनिती बजार राम्रै संग तात्यो । यस्तै स्वतन्त्र मधेसको माग सहित निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको सि के रावतलाई प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र सम्सेर राणा सहितको इजलासले पाचं महिनाको जेल बसाई पछि रिहा गर्यो। त्यसको भोलीपल्ट नै नेपालका प्रधानमन्त्रि तथा नेकपा का अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा का अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड किनारामा साक्षी बसेर गृहमन्त्रि राम बहादुर थापा बादल र सि के रावत बिच ११ बुदे सहमती भयो । विगत पाच महिना देखि सुन्य गतिबिधी रहेको उक्त समुह संग नेकपाको द्वय अध्यक्ष सहित भएर गरेको सम्झौताले नेपाली राननिती फेरी तात्यो । पाटी भित्र र बाहिर निकै चर्चाका रहेको उक्त सहमती को भोलीपल्ट नै फेरी स्वतन्त्र मधेसको नारा तराइमा चम्कियो । त्यो सगैं नेकपा भित्र नेताहरुको पनि कुराहरु बाझिन थाले । विमलेन्द्र निधी, शेरबहादुर देउवा समेतले स्वागत गरेको सहमती भिम रावल लागायत को विरोध गर्दै नेपालको राजनिती बजार चर्कियो । लगातार तातेको नेपाली राजनिती बजार सि के राउतको मुद्दा सेलाउन नपाउदैं नेकपा अध्यक्ष नेत्र विक्रम चन्द विप्लपको पाटी माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले फेरी राजनैतिक बजार ततायो । एन सेल बम काण्ड लगायत पछिल्यो समय बिभिन्न ठाउमा भएका बम काण्डहरुले चिन्तित बनाइरहेको र राजनैतिक वृत तातिरहेको समयमा यो प्रतिबन्धले फेरी राजनैतिक बजार नया मोडमा गएको छ ।
सबै राजनैतिक व्यत्तित्वको मत फरक फरक छ । यसरी छोटो समयमै नेपाली राजनैतिक बजारमा यस्ता यस्ता घटना घटिरहदा सोच्न बाध्य बनायो कि कतै रेशम चौधरी, सि. के रावत र विप्लप देखाउदैं भित्र भित्रै अरु केहि पाकिरहेको त छैन ?
सरकारविरुद्ध ‘इनफ इज इनफ’ : कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग